कारिन्दा उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणाली
२०७७ श्रावण १६ शुक्रबार ०९:३१:००
वास्तविक प्रगतिका लागि आलोचनात्मक शिक्षाको विकल्प छैन, जसले हरउत्तरमा प्रश्न खोज्ने संस्कृतिको निर्माण गरोस्
वर्तमान शिक्षाले योग्यताका नाउँमा अयोग्य मानिसको भिड उत्पादन गरिरहेको छ । यो नै यसको सबैभन्दा ठूलो दोष हो । वर्तमान शिक्षा प्रणालीले प्रतिभा होइन, व्यवस्था टिकाउन अनुकूलका कारिन्दा मात्र तयार गरिरहेको छ, जसले सोेच्न जान्दैन, जससँग प्रश्नहरू छैनन् ।
जोसँग प्रश्न हुँदैन, ऊ समाजका ज्वलन्त मुद्दाबाट टाढा हुन्छ । समाजमा युगीन अत्याचार, शोषण, विभेद, उत्पीडन र विकृतिले नग्न नृत्य देखाउन थाल्छन् । अन्ततः शिक्षितहरूका नाउँमा कामचोर, जड, चाप्लुसहरूको जमात निर्माण हुन पुग्छ । त्यहाँ कुनै खोज हुँदैन, आविष्कार हुँदैन, उत्पादन र रूपान्तरण पनि हुँदैन । जुन शिक्षाले मानिसलाई प्रश्न गर्न सिकाउँदैन, त्यसले समाधान खोज्न सक्षम पनि बनाउँदैन । उसले सामाजिक परिवर्तनमा भूमिका खेल्न पनि सक्दैन ।
शिक्षाको विस्तारसँगै औपनिवेशिक गुलामी त्यही अनुपातमा बढ्दो छ । व्यक्ति योग्य हुनुको अर्थ विदेश जानु र श्रम बिक्री गर्नु हो भन्ने मान्यता स्थापित छ । पढेर विदेश जान नसक्नु अयोग्य हुनु हो भन्ने मान्यता विकास हुँदै छ । विश्वविद्यालयको अध्ययन पूरा गरी शिक्षण क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिभन्दा, निजामती क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने व्यक्ति योग्य मानिन्छ । निजामती क्षेत्रमा पनि धेरै घुस खान पाइने भन्सारलगायत क्षेत्रमा अवसर पाउने व्यक्ति सफल ठानिन्छ । त्योभन्दा बढी सफल त्यो मानिन्छ, जो डिभी परेर या अन्य तरिकाबाट अमेरिका जान सक्छ । समाजमा शिक्षामार्फत कस्तो खालको मानसिक गुलामी निर्माण भएको छ, यसबाट पुष्टि हुन्छ ।
शिक्षाको केन्द्रबिन्दु र सार दुवैमा पैसा छ, समाज रूपान्तरण छैन । त्यसैले, सरकारी जागिर खाने कर्मचारीले घुस नखाँदा अयोग्य र हुतिहारामा दर्ज हुनुपरेको छ । समाजको शिक्षित व्यक्ति समाज रूपान्तरणका निम्ति राजनीति गर्छु भनेर निक्लिँदा निकम्मा घोषित हुनुपरेको छ । सत्तामा पुगेर भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्दा असफल नेताको कित्तामा उभिनुपरेको छ । जनता जागरुक गराउने, न्याय र सत्यको पक्षमा उभिने कार्यकर्ता ‘अव्यावहारिक’ साबित भएको छ ।
शिक्षाको अर्थ ज्ञानसँग गएर जोडिन्छ । जसबाट जीवन र जगत्लाई गहिराइमा पुगेर बुझ्न र जगत्लाई पहिलेभन्दा सुन्दर बनाउन योगदान गर्न सकियोस् । तर, ज्ञान एउटा अमूल्य रत्न हो भनेर स्विकार्ने ठाउँमा समाज पुगेकै छैन । ज्ञान र सीपले युक्त एउटा असल व्यक्तिको निर्माण नै शिक्षाको सफलता हो भन्ने स्थपित भएकै छैन । बचपनदेखि नै एउटा प्रशिक्षण सुरु हुन्छ, ‘जागिर पाइँदैन र पैसा कमाउन सकिँदैन भने पढेर के काम ? अर्थात्, पदवाल र पैसावाल बन्नुपर्छ, चाहे जसरी नै किन नहोस् ।
शिक्षा यतिखेर लगानी गरेर अकुत कमाउने व्यवसाय बनेको छ । शिक्षामा लगानी असल एवं प्रतिभावान् नागरिक निर्माणका खातिर होइन, केवल नाफा कमाउने उद्देश्यले गरिँदै छ । अभिभावकका लागि समेत बालबालिका लगानीका क्षेत्र भएका छन् । यो स्वार्थपूर्ण संकीर्ण मानसिक घेरोबाट मुक्त भएर शिक्षाको सही अर्थ खोज्ने हैसियत समाजसँग छैन ।
यहाँनेर सफलता र सार्थक जीवनलाई हेर्ने सवालमा कस्तो सामाजिक मनोविज्ञान छ भन्ने चर्चा सान्दर्भिक हुन्छ ।
शिक्षामा लगानी असल एवं प्रतिभावान् नागरिक निर्माणका खातिर होइन, केवल नाफा कमाउने उद्देश्यले गरिँदै छ । अभिभावकका लागि समेत बालबालिका लगानीका क्षेत्र भएका छन् । यो स्वार्थपूर्ण संकीर्ण मानसिक घेराबाट मुक्त भएर शिक्षाको सही अर्थ खोज्ने हैसियत समाजसँग छैन।
अपवादलाई छाडेर भविष्यमा के गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण बच्चाहरूले होइन, तिनका अभिभावकले गरिरहेका छन् । पेसा अनि जीवनको उद्देश्य र बाटो तय गर्ने सवालमा उनीहरू स्वतन्त्र छैनन् । अभिभावक बच्चा जन्मेदेखि नै यो तय गर्न थाल्छन् कि, ‘मेरो छोरालाई इन्जिनियर बनाउँछु ! मेरी छोरीलाई डाक्टर बनाउँछु !’ यहीँबाट बच्चाले सहजतापूर्वक र रुचिअनुसारको रोजाइ होइन, हठात् बलपूर्वक लाद्ने कुराको सुरुवात हुन्छ । सन्तानमार्फत आफ्नो प्रतिष्ठा स्थापित गर्न र पुँजीवादी महत्वाकांक्षाको भोक शान्त गर्न प्रयास गरिन्छ । असल बन्नुपर्छ, स्वाभिमान र विवेकी बन्नुपर्छ, करुणावान् र उदार हुनुपर्छ भन्ने कुरा शिक्षाको लक्ष्य र उद्देश्यमा गायब छ ।
एउटा अर्को घातक चिन्तन छ, व्यक्तिगत स्वार्थ र सामाजिक स्वार्थलाई अलग गर्ने चिन्तन । व्यक्तिगत स्वार्थ सामाजिक स्वार्थकै सानो रूप न हो । व्यक्ति समाजको अधीनस्थ हुन्छ । तर, व्यक्तिगत स्वार्थ र सामाजिक स्वार्थलाई फरक गर्न खोजिन्छ । व्यक्तिका हरेक इच्छाले सामाजिक हित–अहितलाई प्रभावित गर्छन् । विद्यमान शिक्षा प्रणालीले सहकार्य, समानता र सामूहिक प्रगतिको कुरा गर्दैन, प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्छ । सामाजिक मुक्तिको होइन, व्यक्तिगत लाभहानिको कुरा गर्छ । त्यसैले, अहिलेको शिक्षा प्रणालीले गढ्ने व्यक्ति भनेको अराजनीतिक व्यक्ति हो । ऊ अराजनीतिक होस् र उसले भनोस् कि म एउटा डाक्टर हुँ, मैले किन राजनीतिका बारेमा सोच्ने ? अर्थात् राजनीतिको बारेमा टाउको नदुखाएर ऊ शोषणकारी सत्ताको राजनीतिक पुर्जा बन्न सकोस् । त्यसका लागि उसलाई जति सक्यो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक चिन्तनबाट अलग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, राजनीतिक चिन्तन गर्न थाल्यो भने उसले यो मात्र सोच्दैन कि म कुन राजनीतिक व्यवस्थाभित्र छु ? बरु, उसले यो पनि सोच्न थाल्छ कि हुनुपर्ने कस्तो राजनीतिक व्यवस्था थियो ?
यद्यपि, राजनीतिका नाउँमा शिक्षक–विद्यार्थीलाई दलीय सत्ताका अनुयायी बनाउने र भोटबैंकका रूपमा प्रयोग गर्ने काम भने भइरहेकै छ । तर, राजनीतिक दलको पिछलग्गु हुनु र आफूलाई राजनीतिक प्राणी बनाउनु अलग कुरा हुन् । राजनीतीकरणको आवरणमा अमुक दलको भजन मात्र गाउने चिन्तन सामन्तवादी चिन्तन नै हो ।
सामाजिक प्रशिक्षण पनि त्यहीअनुकूलको छ, पहिला व्यक्ति बन, परिवार बन, त्यसपछि मात्र समाजको लागि सोच ! यदि कुनै गरिबको सन्तान राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनमा सरिक भएर समाज रूपान्तरणमा योगदान गर्ने कुरा गर्छ भने अपवादबाहेक ऊ बेकारको दरिन्छ । जोखिम नउठाउने, सुरक्षित हुने र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा हुने सर्तमा आफ्नो सन्तान भयानक समाजविरोधी र परपीडक भएको स्विकार्न समाज तयार छ ।
एकथरी अभिभावकका निम्ति राजनीति फोहोरी खेल हो । उनीहरू आफ्ना सन्तान त्यसबाट टाढै बसिदिएहुन्थ्यो भन्ने कामना गर्छन् । राजनीतिक चिन्तनबाट अलग रहन खोज्ने बुर्जुवा चिन्तन यसका निम्ति जिम्मेवार छ । तर, जब तिनै व्यक्तिको सम्बन्ध माथिल्लो तहमा राजनीतिक नियुक्ति पाएको वा सांसद, मन्त्री भएको व्यक्तिसँग जोडिन्छ, त्यसलाई चाहिँ आफ्नो सौभाग्य ठान्छ । राजनीतिलाई फोहोरी खेल ठान्ने अर्को मनोविज्ञानका पछाडि बुर्जुवा वर्गीय भ्रष्ट राजनीतिक अभ्यास पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ ।
सन् २००९ मा बनेको हिन्दी चलचित्र ‘थ्री इडियट’मा घोकन्ते यान्त्रिक शिक्षामाथि व्यंग्य गर्ने एउटा रोचक संवाद छ, ‘लाइफ इज अ रेस, अगर तेज नही दौडोगे, तो कोई तुम्हे कुचलकर आगे निकल जायेगा ।’ आज समाजमा यही मान्यताको बोलवाला छ । तर, एउटा यक्ष प्रश्न पनि सँगसँगै उभिन्छ कि जीवनको यस्तो दौड प्रतियोगिताबाट प्राप्त सफलताले मानवताको सेवा गर्न सक्छ ?
अगाडि निस्किने महत्वाकांक्षाको यो अन्ध प्रतियोगितामा माछालाई पानीमा खेल्नबाट वञ्चित गरेर जबर्जस्ती उड्ने तालिम दिइँदै छ, हाँसलाई पौडिनबाट वञ्चित गरेर रूख चढ्ने तालिम दिइँदै छ । जबकि संसारमा हरेक व्यक्ति आफैँमा विशिष्ट सिर्जना हुन् । उनीहरू आफ्नै विशेषताका आधारमा बाँच्न र समाजका लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छन् । तर, अहिलेको व्यवस्थाले शिक्षाको नाउँमा सबै मानिसलाई एउटै आकारको साँचोमा ढाल्ने दुष्कर्म गरेको छ ।
स्वतन्त्र र सिर्जनात्मक चिन्तनका लागि कुनै ठाउँ उपलब्ध नगराउनु मौजुदा शिक्षा प्रणालीको सबभन्दा ठूलो खोट हो । यो शिक्षाले स्वतन्त्र एवं सिर्जनात्मक चिन्तन मेटेर पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र फिट हुने पुर्जा तयार गरिरहेको छ । सामाजिक चिन्तनबाट विमुख जीविकामुखी व्यक्ति जति नै दक्ष किन नहोस्, त्यसबाट सामाजिक रूपान्तरण सम्भव हुँदैन । तसर्थ शिक्षामाथि औपनिवेशिक दासत्व कायम छ । त्यसैले, अर्थव्यवस्था चलाएको छ, राजनीति चलाएको छ र सरकार चलाएको छ ।
वास्तविक प्रगतिका लागि आलोचनात्मक शिक्षाको विकल्प छैन । जसले हरउत्तरमा प्रश्न खोज्ने र देख्ने संस्कृतिको निर्माण गरोस् । तर, शिक्षाको नाउँमा विद्यार्थीको दिमागमा कस्तो पंगु धारणा विकास गरिन्छ, त्यो हेर्न प्राथमिक तहमा पढाइ हुने विज्ञान र सोही तहको नैतिक विषयको पाठलाई हेरे पुग्छ । विज्ञानको पुस्तकमा ब्रह्माण्डको उत्पत्तिबारे महाविस्फोट सिद्धान्तको चर्चा गरिएको हुन्छ । तर, त्यही तहको नैैतिक विषयको कुनै पाठमा ब्रह्माण्डको सृष्टि ईश्वरबाट भएको लेखिएको हुन्छ । शिक्षाको बिजोग यतिमा मात्र सीमित हुँदैन ।
परीक्षामा यी दुवै विषयबाट आएको एउटै प्रश्नको उत्तर विज्ञान विषयमा महाविस्फोटको सिद्धान्तअनुसार ब्रह्माण्डको सृष्टि भएको भनेर र नैतिक शिक्षाको प्रश्नमा सबैका सृष्टिकर्ता एवं पालनकर्ता ईश्वरले नै यो ब्रह्माण्डको सृष्टि गरेका हुन् भनेर लेख्नुपर्छ । यस्तो उत्तर लेखेर नै उसले राम्रो अंक ल्याई पास गर्न सक्छ र मेधावी विद्यार्थीमा दरिन्छ । विवेकको प्रयोग गर्न वर्तमान शिक्षा र मूल्यांकन प्रणालीले दिँदैन । कलिलो उमेरमै शिक्षाको नाउँमा मानिसको मस्तिष्कलाई यसरी कजाइसकेपछि विवेक र चिन्तन मर्दै गएर एउटा घोकन्ते, यान्त्रिक र जीविकामुखी प्राणी तयार नभए के हुन्छ ?
शिक्षा प्रणालीमा विद्यमान विकृतिको यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । यस्तै विरोधाभास र विकृतताले व्याप्त छ, वर्तमान शिक्षा प्रणाली । यो साँचोमा ढलिसकेपछि मानिस केवल एउटा आर्थिक प्राणीमा सीमित हुन्छ । जसका लागि ज्ञान र शिक्षा भनेको पाठ्यपुस्तकमा भएका बनिबनाउ कुरा याद गर्नु हो । तिनै कुरालाई उत्तरपुस्तिकामा उतार्नु हो र वर्तमान आर्थिक–राजनीतिक–सांस्कृतिक व्यवस्थालाई सघाउने एउटा अब्बल पात्र बन्नु हो । तर, आवरणमा त्यही व्यक्ति वर्तमान व्यवस्थाले भिडाइदिने सक्षम, योग्य र सफल प्रतिभाको तक्मा देखाएर समाजमा स्थापित छ ।
यसै सन्दर्भमा भारतीय प्राध्यापक राकेशकुमार लेख्छन्–‘शिक्षाले मनुष्यलाई असल बनाउँछ ।’ यस वाक्यमा कुनै प्रकारको व्याकरणिक त्रुटि छैन, तर यो वाक्य एउटा अधुरो विचार अवश्य हो । यसले कुन प्रकारको शिक्षाले मानिसलाई असल बनाउँछ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदैन । यसले कसले त्यो शिक्षा दिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि दिँदैन । एउटा असल मानिस निर्माणका लागि यो आवश्यक छ कि शिक्षा विद्यार्थीको करिअरको बाटो मात्र नहोस्, बरु त्यसले विद्यार्थीको मानसिक–सामाजिक स्वास्थ्यलाई पनि ठीक राखोस् । एउटा यस्तो नागरिक तयार गर्न सकोस्, जसले समाजमा समानता र स्वतन्त्रताको मूल्य र महत्व बुझ्न सकोस् र स्थापित गर्न सकोस् ।
शिक्षाको महत्व केवल प्राप्तांक, पद, पावर, प्रतिष्ठा र पैसासँग मात्र सीमित हुनुले यसले स्थापित गर्न सक्ने महान् आदर्श गायब बनाइदिएको छ । यसका पछाडि सिंगै वर्तमान व्यवस्था र सत्ताधारीको स्वार्थ जोडिएको छ । त्यसकारण शिक्षा राजनीतिक व्यवस्था र सत्ताभन्दा कुनै निरपेक्ष विषय होइन । शिक्षासँग दक्षता, सिर्जनशीलता र सीपको विकास मात्रै जोडिँदैन बरु त्योसँगसँगै मानिसको सांस्कृतिक पुनर्जन्म, उन्नयन र व्यक्तित्व विकास पनि अपरिहार्य रूपमा जोडिन पुग्छ।
नयाँ आविष्कार र परिवर्तनको सुरुवात त्यहीँबाट हुन्छ, जहाँ स्थापित मान्यता र यथास्थितिमाथि प्रश्नहरू उठ्न थाल्छन् । तर, वर्तमान शिक्षा प्रणालीले प्रश्न र उत्तर दुवैलाई पाठ्यक्रम र शिक्षण संस्थाहरूको बन्द पाना र कोठाको संसारमा कैद गरेर राखेको छ । यस्तो लाग्छ, यी दुई संसारभन्दा बाहिर निस्किनेबित्तिकै सबै प्रश्न र उत्तरहरूको अन्त्य हुन्छ । यो बन्दी मानसिकताको उपनिवेश हुँदासम्म हाम्रो शिक्षा, शिक्षा नभएर सत्ताका रैती उत्पादन गर्ने कारखाना मात्र भइरहनेछ।
चिनियाँ शिक्षा प्रणालीको नरोकिने उदय
हाम्रो शिक्षा प्रणालीका समस्या
शिक्षा प्रणालीभित्र अस्वीकृत दलित समुदाय
सरकार मुलुकको शिक्षा प्रणाली सुधार गर्न तयार : रक्षामन्त्री पोखरेल